Otu esi aga gburugburu Paris | Akụkọ Njem
Otu esi aga Paris
Maria | | Obodo, Paris
Paris nwere ọtụtụ ihe nketa na ọdịbendị ọdịnala gbasaa site na nsọtụ ruo na njedebe nke obodo ahụ, yabụ ọ dị mkpa iji ụgbọ njem iji chọpụta saịtị niile nwere mmasị. Ọ dabara nke ọma, isi obodo French nwere ike ịnya isi maka inwe netwọọdụ ọha na eze. Lee ụzọ ụgbọ njem ha bụ isi.
Dị ka obodo niile nwere suburban, metro bụ njem kachasị ọsọ iji gafere obodo ahụ. O nwere ahịrị iri na isii nke na - arụ ọrụ site n ’ụtụtụ ise ruo ụtụtụ ruo 16 ụtụtụ. N’abalị Fraịde na Satọde, a na-emechi metro ahụ n’elekere abụọ nke ụtụtụ, elekere elekere.
Kemgbe mmalite ya na 1900, ejiri nwayọọ nwayọọ gbasaa metro iji nwee ọdụ ụgbọ 303 na kilomita 219, ọ bụ naanị London na Madrid karịrị ya. Stationsfọdụ ọdụ ụgbọ anaghị arụ ọrụ nke ọma, yabụ ọ bụ ihe amamihe dị na ya ị paya ntị nke ọma iji zere ịpụ ụzọ na-ezighi ezi. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa iji nweta eserese njem nke Paris mgbe ị ruru n'ọdụ ụgbọ elu ma ọ bụ ọdụ ọdụ ụgbọ mmiri mbụ.
Gagharị na etiti obodo, Metro jikọtara ya na RER. Tiketi ahụ bụ otu ihe, ị gaghị ahụkwa ọdịiche dị. Banyere ụdị tiketi anyị na-ahụ: otu tiketi, kwa ụbọchị na kwa izu na-agafe, tiketi t +, Paris Visite na Passe Navigo.
Ihe RER pụtara bụ Réseau Express Régional. Tragbọ oloko RER bụ ụgbọ oloko mpaghara ndị mejupụtara netwọọdụ metro mgbe ha na-agagharị n'etiti etiti Paris yana ha nwere ike iru ebe dị anya dị ka Versailles, Disneyland na Charles de Gaulle.
Netwọk ngagharị nke Paris nwere ihe karịrị ọdụ 250, ahịrị ise na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kilomita 600 nke egwu. A na-akpọ akara RER na akwụkwọ ozi: A, B, C, D na E, atọ ndị mbụ bụ ndị njem nlegharị anya. Usoro RER dabere na akara dị n'etiti 4:56 am na 00:36 am.
Ọnụ ahịa ụgbọ okporo ígwè RER na-adabere n'ebe dị anya. Mpaghara nke ọ bụla nwere ezigbo tiketi, dịka ọmụmaatụ, na mpaghara 1 na Paris ụgbọ njem ụgbọ oloko ahụ dị ka metro, mana ịga Versailles ị ga-azụ tiketi kwesịrị ekwesị. Igwe ndị na-arụ ọrụ n'ọdụ ụgbọ ahụ na-enye gị ohere ịbanye ebe ịchọrọ ma dabere na nke a, a ga-aka akara ọnụahịa ma ọ bụ ọzọ.
Dabere n'okporo ụzọ ahụ, ọkachasị ma ọ bụrụ na ha dị ogologo, oge ụfọdụ ọ na-adaba adaba iji were ụgbọ oloko RER ebe ọ na-eme ka nkwụsị dị ole na ole karịa metro ma dị ngwa ngwa. Enwere ike iji obere oge metro 30 nkeji gaa ụgbọ oloko ruo 10 nkeji.
Paris nwere ihe karịrị tagzi 20.000 na-ekesa kwa ụbọchị site n'okporo ámá ya. Ewezuga oge ụfọdụ n'abalị, ọ naghị esikarị ike ịchọta tagzi n'efu.
Inggbada ọkọlọtọ nwere ọnụ ahịa nke euro 2,40 na mgbakwunye nke euro 3 ka a na-akwụ maka onye njem nke anọ na 1 euro maka akpa nke ọ bụla site na nke abụọ. Enweghị ụgwọ maka ịhapụ ọdụ ụgbọ elu Charles de Gaulle, Orly ma ọ bụ site na ọdụ ụgbọ oloko.
Ofgwọ tagzi bụ otu ma ị gara na nkwụsị, ọ bụrụ na ịkwụsị ya n'okporo ámá ma ọ bụ na ị kpọrọ ha na ekwentị. Cheta na ọrụ kacha nta nwere ọnụ ahịa euro 6,20 gụnyere mgbakwunye niile.
Otu n'ime ihe ndị kasị ala ụzọ iji nweta gburugburu Paris bụ ụgbọ ala. Enwere ihe kariri ubochi 60 na uzo 40. Ọtụtụ ahịrị na-agafe n'etiti, site na agbata akụkọ ihe mere eme na akụkụ nke Seine.
Uru nke ụgbọ ala ahụ bụ na ọ dị ngwa ngwa maka obere oge na n'oge njem ị nwere ike ịtụgharị uche na obodo ahụ, nke dị nkenke bụ ụzọ ọzọ esi eme njem. Banyere ọghọm ya, ogologo njem n'oge awa nwere ike ime ka anyị rute n'azụ oge.
Banyere usoro ihe omume, n'ozuzu bọs na-arụ ọrụ site na Mọnde ruo Satọdee site na 07: 00 ruo 20: 30 elekere, ọ bụ ezie na usoro ndị bụ isi na-agba ọsọ ruo 00: 30 am Na Sọnde na ezumike, ọtụtụ ahịrị anaghị arụ ọrụ.
N’ebe bọs na-akwụsị, a na-aka akara usoro iheomume n’ahịrị nke ọ bụla, ma mgbe bọs mbụ na nke ikpeazụ ga-apụ, yana ụbọchị ọrụ na ugboro ole ha na-aga. Dabere na ọnwa, mgbe ụfọdụ awa nwekwara ike ịdị iche.
Busgbọ ala abalị na-agba n'etiti 00:30 na 07:00 nwere ugboro 15 ruo 30 na ụbọchị ụbọchị yana site na 10 ruo 15 na ngwụsị izu. A na - amata ha site n’inwe leta N tupu akara akara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Otu esi aga Paris
Towerlọ elu Montparnasse, echiche sitere na echiche kachasị elu na Paris